Jamaica na -akwado ụgbọ elu ọhụrụ 50+ kwa izu n'etiti Canada na Jamaica
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Jamaica na -akwado ụgbọ elu ọhụrụ 50+ kwa izu n'etiti Canada na Jamaica
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Jamaica Edmund Bartlett (R) na onye isi oche ụgbọ elu Canada ọhụrụ OWG, Marco Prud'Homme (L) na onye isi mmepe mmepe, Karine Levert na Toronto, Canada na Fraịde, Ọktoba 1, 2021.
Ndị isi ndị ọrụ ụgbọ elu kacha ukwuu na Canada ekwenyela na Minista njem nlegharị anya Jamaica Edmund Bartlett na ndị isi ya na ngụkọta ụgbọ elu 50 na -akwụsịghị akwụsị kwa izu n'etiti Canada na Jamaica malite na Nọvemba 1, dị ka ahịa nke abụọ kachasị na Jamaica maka ndị njem na -alaghachi azụ mgbe ihe karịrị otu afọ na ọkara n'ime ọgba aghara n'ihi ọrịa COVID-19 na mmachi mgbochi gọọmentị machibidoro njem njem.
Okporo ụzọ Resilient Jamaica, ebe ọtụtụ ndị njem na -anọ ezumike, nwere nchekwa na ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi dị elu yana ọnụego ọrịa efu efu.
A na -eme nzukọ ndị a iji mee ka ndị bịarutere ebe a n'izu na ọnwa ndị na -abịanụ, yana, iji kwalite itinye ego na mpaghara ndị njem.
Njem nleta dị oke mkpa maka mgbake akụ na ụba Jamaica.
Air Canada, WestJet, Sunwing, Swoop na Transat ga -ejikwa ụgbọ elu ndị ahụ na -akwụsịghị akwụsị site na obodo Canada nke Toronto, Montreal, Calgary, Winnipeg, Hamilton, Edmonton, St. John, Ottawa, Moncton na Halifax.
Bartlett kwuru na ahịa Canada nwere ugbu a, “akwụkwọ ntinye n'ihu na -agbagharị ihe dị ka 65% nke ọkwa 2019 na ikuku ikuku maka oge oyi na gburugburu 82% nke ọkwa 2019 yana ihe dị ka oche 260,000 kpọchiri. Ihe mgbochi njem metụtara COVID-19, nke mechiri njem mba ofesi ruo ọtụtụ ọnwa n'ụzọ nkịtị. Ugbu a ihe karịrị 80% nke ndị Canada tozuru etozu karịa afọ 12 gbara ọgwụ mgbochi zuru oke megide COVID-19 yana ibelata mmachi njem mba ofesi, anyị na-akpachapụ anya na-enwe nchekwube. Ha na -enwekwa obi ụtọ site n'eziokwu ahụ bụ na Resilient Corridors nke Jamaica, ebe ọtụtụ ndị njem na -eme ezumike, nwere nchekwa na ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi dị elu yana ọnụego ọrịa efu efu. ”
Onye nlekọta njem nlegharị anya Edmund Bartlett (2nd R) ka a na -ahụ ebe a site n'aka L - R: Dan Hamilton, Onye njikwa ire ahịa District District nke Jamaica (JTB), Canada; Donovan White, onye isi njem nlegharị anya; Angella Bennett, onye isi mpaghara mpaghara JTB, Canada na Delano Seiveright, onye ndụmọdụ dị elu na atụmatụ, Ministry of Tourism na Toronto, Canada na Fraịde, Ọktoba 1, 2021.
Bartlett sonyeere n'usoro nsonye ya na ndị isi ụlọ ọrụ njem na Toronto, Canada site n'aka onye isi oche nke Jamaica Tourist Board (JTB), John Lynch; Onyeisi njem nlegharị anya, Donovan White; Onye Ọkachamara Ọkachamara na Ngalaba Njem Nleta, Delano Seiveright na onye isi mpaghara JTB maka Canada, Angella Bennett. Ntinye aka dị elu na-eso nzukọ ndị isi ndị isi ụgbọ elu, ụzọ ụgbọ mmiri na ndị ọchụnta ego, n'ofe nnukwu ahịa Jamaica, United States. A na -eme nke a iji mee ka ndị bịarutere ebe ha na -aga n'izu na ọnwa ndị na -abịanụ, yana, iji zụlite itinyekwu ego na mpaghara njem nlegharị anya mpaghara.
Dị ka ọ dị maka onye ọ bụla gafere afọ 12 na -aga Jamaica, Ndị Canada ga-egosi ihe akaebe nke nnwale COVID-19 na-adịghị mma emere n'ime awa 72 ọpụpụ.
Ka ọ dị ugbu a, n'ịtụle mkpa njem dị mkpa maka mgbake akụ na ụba Jamaica, Bartlett kwusiri ike na, "ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa na mgbake ọrịa na-efe efe nke Jamaica na ezi ihe kpatara ya. Ọ dịghị ụlọ ọrụ ka mma ga -akwalite uto akụ na ụba nke nwere amamihe na nke ga -adigide chọrọ iji mee ka obodo a gaa n'ihu. Enweghị ụlọ ọrụ ka mma iji bulie ego ha nwetara, weghachi ọrụ ma mepụta ohere ọhụrụ na obodo n'ofe Jamaica. ”
Maazi Seiveright gara n'ihu chịkọta ụfọdụ nsogbu ndị chere. Ọ kọwapụtara nke a: “Ntinye aka n'ofe United States na Canada butere ọtụtụ nsogbu nke Minista Bartlett ga -edozi nsogbu ya na ndị ọrụ minista ya iji belata ihe mgbochi na -eto ngwa ngwa ma na -aga n'ihu n'izu na ọnwa ndị na -abịanụ. N'ime okwu ndị dị na njedebe nke Jamaica bụ mkpa ọ dị ịkwalite mbọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, site na lọjistik ahụike ọha maka ahịrị ụgbọ mmiri na ndozi ndị ọzọ iji mee ka obi sie ndị ọrụ ibe anyị ike. Na agbanyeghị na enwere ụfọdụ ihe mgbochi na ihe isi ike ndị na-anọghị na njikwa anyị gụnyere iwu njem siri ike nke COVID-19 nke Canada, nke gụnyere mkpa maka nnwale PCR iji banye na obodo yana ngwa agha na ihe ịma aka njem maka ahịrị Cruise. ”